आज पुष २४ गते पत्याउनै नसकिने गरि घट्यो सुनको भाउ ! – Sandesh Press
आज पुष २४ गते पत्याउनै नसकिने गरि घट्यो सुनको भाउ !
January 8, 2021 186
काठमाडौँ । आज साताको छैटौँ दिन अर्थात शुक्रबार सुनको भाउ घटेको छ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो तेजावी सुन प्रतितोला ९४ हजार ९ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
यस्तै, आज चाँदीको भाउ भने स्थिर छ। आज चाँदी प्रतितोला १३ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ
नेपाल प्रहरीका एक निरीक्षकले लोभमा पर्दा जागिर गु मा उ नु पर्ने अवस्था आएको छ । उनी १५ हजार घुस मामिलामा तानिएका थिए । सडक दुर्घटना गराउनेसँग १५ हजार लिएर घटना सामसुम गर्न खोज्दा उनको यो हालत भएको हो ।
घुस लिएको आरोप लागेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्तले थानकोटमा कार्यरत ती इन्सपेक्टर गायत्रीराज शर्मालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । हालै उनलाई गृहमन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ ।
शर्मालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले निलम्बन गर्ने निर्णय हो । शर्माले सवारी दुर्घटना मु द्धामा १५ हजार घुस लिएको संगठनभित्र थाहा भएको थियो । त्यसपछि उनलाई पुस १९ मा काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए ।
उनको यस्तो क्रियाकलापको डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएका थिए । सोही सूचनाका आधारमा तानिएका शर्मालाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयको सिफासिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा निलम्बनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
Prevआमासंगको त्यो अन्तिम फोन जसले सारा नेपाली रु’वायो, यस्तो भनेकी रहेछिन
Nextभा’इरल भीम बिकलाई दु’र्व्यबहार गर्नेलाई यस्तो स’जाय-भिडियो हेर्नुहोस
प्रत्येक्षदर्शीले खोले घ’टना हुनुको रहस्य, टिकटकको लागि कर्णालीबाट तीन जनाले हा’म फा’ल्दा (भिडियो)
देशमा एउटा अस्पताल बनाएको भए हजारौं सीता बा,च्ने थिए कमरेड = ज्वाला सङ्ग्रौला